Discount Polyurethane pfapfaidzo furo muchina Kugadzira uye Fekitori | XiongHuye
Polyurethane inopupuma fuma zvinhu zvine zvakawanda zvakanakira sekusimudzira, kupisa proofing, ruzha proofing uye anticorrative nezvimwewo Zvinoshandiswa munzvimbo zhinji.Environmental zvine hushamwari uye simba-kuchengetedza.Kudzivirira uye kupisa basa basa kuri nani kupfuura chero zvimwe zvigadzirwa.
Pu pfapfaidzo muchina mikana:
1. Pneumatic yekumanikidza mudziyo une hunhu hwehukuru hushoma, kurema uremu, yakaderera kutadza chiyero, nyore mashandiro uye nyore kufamba;
2. Nzira dzefemorika dzepamberi dzinoita kuti michina ishande yakatsiga;
3. Iyo yakawanda yekusefa yekushandisa chishandiso inogona kudzora kupeta kuvhara.
4. Multi-leakage dziviriro sisitimu inogona kuchengetedza kuchengetedzwa kwevanoshanda;
5. Yakashongedzerwa neye emergency emergency switch system, iyo inogona kukurumidza kupindura kune emergency.
6. Iyo yekudziya sisitimu inogona kupisa iyo mbishi zvinhu kune yakanaka mamiriro kusangana neyakajairika kuvakwa kwemidziyo;
7, iyo yekushandisa mashandiro epaneru yakakwenenzverwa marongero, zviri nyore kugona mashandiro maitiro;
8. Pfuti nyowani yekupfira ine zvakanakira diki saizi, kurema uremu uye yakaderera kutadza chiyero;
9. Iyo yekupa pombi inotora yakakura kusiana reshiyo nzira, iyo inogona zvakare nyore kufudza zvekushandisa kana iyo viscosity yezvakagadzirwa zvigadzirwa yakakwira munguva yechando;
Simba rekushandisa: chikamu chimwe chete 220V 50HZ (inogona kuvezwa)
Kuchenesa simba: 7.5kw
Dhiraivha nzira: pneumatic
Kunobva Mhepo: 0.5-0.8MP≥0.9m3 / miniti
Raw kuburitsa: 2-12 kg / min
Kunonyanyisa goho kumanikidza: 11Mpa
AB zvinhu zvinobuda reshiyo AB: 1: 1
Midziyo Yakagadziriswa Kugadziriswa:
Main muchina: 1 seti
Mwaya pfuti: 1 seti
Nokusimudza pombi: 2 rinovira
Bhari yekubatanidza: 2 seti
Kupisa mapaipi: 15meters (akareba 60meters)
Mwaya pfuti zvinobatanidza: 2 metres
Chishongedzo bhokisi: 1 seti
Bhuku rekudzidzisa: 1 kopi
Kunyanya yekudira kuvaka, kupuruzira kuvaka, buffer kurongedza.
Yekupfapfaidza: Kuvaka kunze uye kwemukati madziro kupopera, kutonhorera kwekuchengetera, kuputira makabati uye noiseproofing yemota & bhazi, kuputira padenga uye isapinda mvura, marori efiriji uye maindasitiri anticorrative kupuruzira.
Zve kudira: solar mvura hita, firiji, furiza, pombi majoini, musuwo-kutsemuka padding, zvigadzirwa padding & kurongedza, roller shutter gonhi, chengetedzo musuwo, mugwagwa kuvaka, rusvingo noiseproofing, mamiriro ekumodhiza etc.
Pashure: eps furo mhete
Zvadaro: Bemhapemha muchina